Proterozoic Eon: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime akpịrịkpa nke geological oge nke na-eme Precambrian bụ Proterozoic. Ọ bụ Aeon nke bidoro ihe dịka ijeri afọ 2500 gara aga wee ruo ruo nde 542 afọ gara aga. N'ime oge a, enwere mgbanwe mgbanwe dị ukwuu na mbara ụwa, n'etiti nke anyị depụtara ọdịdị nke ihe osise mbụ na-abawanye na ikuku oxygen na mbara igwe. Nke ahụ bụ, n'oge Eon ụwa anyị weghaara ebe obibi.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna nke Proterozoic Eon.
2 Gero protein na nchekwa
3 Flora na anụmanụ nke Proterozoic
Otu n'ime njirimara kachasị na Proterozoic anyị hụrụ ọnụnọ nke cratons na ụwa anyị. Cratons ndị a abụghị naanị ebe etiti ebe kọntinent dị. Nke ahụ bụ, cratons bụ ụlọ izizi ndị enwere ike mepụta ma kpụọ shelf shelf kọntinent. Cratons ndị a mebere nkume mgbe ochie. Oge ochie nkume ndị a sitere na 570 nde afọ ruo 3.5 giga afọ.
Njirimara bu ihe cratons nwere bu na ha anaghị arịa ụdị mgbaji ọkpụkpụ afọ ọ bụla. Ndị a bụ mpaghara kachasị kwụsie ike nke ụwa niile. Anyị nwekwara ike ịhụ na n'oge Proterozoic stromatolites pụtara. Ha bụ ihe owuwu ndị sitere na microorganisms na-ebupụta calcium carbonate. Ndị ọkà mmụta sayensị amụọla stromatolites a ogologo oge ma achọpụtala na ọ bụghị naanị na ha nwere cyanobacteria kamakwa enwere ihe ndị dị ka ero, ahụhụ, red algae, wdg.
Ndị a stromatolites na-etolite ndekọ ndekọ ala nke nnukwu mkpa maka ọmụmụ nke ndụ na mbara ụwa. Njirimara ọzọ nke Proterozoic pụtara bụ mmụba nke itinye ikuku oxygen na ikuku. N'ihi mmụba a nke ikuku oxygen na mbara igwe, nnukwu ọrụ ndu nwere ike ime. Ikuku oxygen erughị ogo dị elu mana ọ na-aga n'ihu na-enyere aka melite ịgbasawanye ihe ndị dị ndụ.
E nwere nnukwu ihe omume ma ọ bụ otu ihe dị mkpa ma dị mkpa nke gụnyere usoro ihe omume metụtara mmụba a na ikuku oxygen. Ma ọ bụ na ọnụọgụ oxygen karịrị ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mmeghachi omume kemịkal nwere ike ịmịkọrọ. A na-emetụta ihe ndị dị ndụ na anaerobic na ndị bi na ha malitere ịjụ. A na - akpọ ihe ndị a methanogens, ebe ọ bụ na ihe bụ isi ha ji enweta ihe bụ methane. Ọnwụ a nke methane nwere nsonaazụ na ọkwa ihu igwe nke mere ka ọnọdụ ụwa dum belata.
Gero protein na nchekwa
Enwere obere ihe ọmụma banyere Aeon a, mana amaara na mgbanwe ndị bụ isi dị na ọkwa tectonics. N’oge ahụ ụwa anyị a na-agbagharị ngwa ngwa karịa ka ọ dị taa. Nke a mere otu ụbọchị n ’ụwa naanị awa iri abụọ. N’ụzọ megidere nke ahụ, usoro ntụgharị okwu nwere nwayọ nwayọ karịa nke ugbu a. N'ihi ya, afọ zuru ezu bụ narị ụbọchị anọ na iri ise.
Enwetara ozi buru ibu site na okwute si Proterozoic. Nkume ndị a emebiwo site na mbuze, ọ bụ ezie na enwere ike ịnapụta ndị ọzọ na-enweghị ike ịgbanwe.
Flora na anụmanụ nke Proterozoic
N’oge a bụ ebe ụdị izizi nke ndụ malitere ịpụta ihe karịa mgbe ha pụtara n’oge Mgbe ochie. Ọ bụ n'ihi mgbanwe ahụ mere na mbara igwe na ihe ndị dị ndụ nwere ike ịgbasa ma gbasaa n'ókèala ahụ. Ebidola ịmepụta ihe ndị dị ndụ na osisi na anụmanụ nke usoro ndụ ọ bụla. Nke a bụ n'ihi mgbanwe nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ga-abụ mgbe anụmanụ ma ọ bụ osisi ga-eme mgbanwe maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị iche iche.
Ngwurugwu prokaryotic malitere itolite n'oge Archaic, ma ha mepụtara ọzọ n'oge Proterozoic. N'etiti ihe ndị a nke prokaryotic anyị na-ahụ algae na-acha akwụkwọ ndụ nke a maara dị ka cyanobacteria na nje bacteria niile.
N'ime oge nke oge nke Eon a, anyị nwere ike ịhụ na nje mbụ nke eukaryotic pụtara na enweelarị ntọala akọwapụtara. Akpa algae nke klaasị nke klas Chlorophytas na red algae nke klas nke Rodhophytas bụ ndị mbụ pụtara. Klas nke algae bụ multicellular na photosynthetic. Site na mmezu nke photosynthesis, ha nyere aka na nchupu oxygen n'ime ikuku.
Ọ dị mkpa ịmara na ihe niile dị ndụ biri na Proterozoic Eon ha mere ya na gburugburu mmiri. Ma ọ bụ na n'oké osimiri bụ ebe enwere ọnọdụ kacha nta dị mkpa iji dịrị ndụ.
Banyere ụmụ anụmanụ, anyị nwere ike ikwu na n'oge a, achọtara ihe ụfọdụ dị ndụ taa dịka obere ome, dị ka spong. Enweela ike inwetaghachi ihe ochie nke anụmanụ nke sitere na otu sara mbara nke ha nọ jelii, azu, polyps na anemones. Isi njirimara ndị otu a nke anụmanụ bụ na ha nwere radial symmetry.
N'ezie i nuru nke Jehova Ediacara fauna. Ihe a bu nchoputa akpukpo ala nke nochiri anya ndi mbu di ndu nke amara na mbara uwa a. A hụrụ nrịba fụjiji na anemones tinyere ụdị ndị ọzọ ka na-agbagwoju ndị ọkà mmụta ihe mgbe ochie anya.
Na mbido nke Proterozoic ihu igwe dị mma. Ikuku a na-elekwasị anya n'ọtụtụ gas na-ekpo ọkụ, nke nke methane gas pụtara. Otú ọ dị, mgbe mmepe nke cyanobacteria na mmepụta nke ihe ndị na-emepụta photosynthetic, ha mere ka ọtụtụ ikuku oxygen. Nke a kpatara mbelata gas nke methane site na ikuku site na ọnwụ nke ihe ndị na-eme ka anaerobic. Iji belata ikuku gas na-ekpo ọkụ na mbara igwe, ntakịrị ihe dị na radieshon na-echekwa, ya mere okpomọkụ ụwa zuru ebelata.
N'oge Proterozoic enwere ọtụtụ glaciations. Nke kachasị njọ bụ oge ice nke Huronian. Igwe glasia a mere puku afọ abụọ gara aga wee mee ka anaerobic dị ndụ dịrị n’oge ahụ pụọ n’anya.
A na-ekekarị Proterozoic Aeon na oge 3: Ọ bụ Paleoproterozoic, ọ bụ Mesoproterozoic, ọ bụkwa Neoproterozoic.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Proterozoic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Proteozoic Aeon